बाबुरामसँग कांग्रेसले माग्यो बुढीगण्डकी परियोजनामा अबौं खाएको प्रमाण « Gaunbeshi
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाबारे दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कांग्रेसले चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ ।
आइतबार कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले अनुसन्धानको माग गरेको छन् । भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतले अर्बौं कमिसन लिएको भनी दिएको आरोप प्रमाणसहित पुष्टि गर्न चुनौती दिएको हो ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयकै जगमा पार्टीको पछिल्लो महासमिति बैठकले पनि ‘बुढिगण्डकी परियोजना स्वदेशी लगानीमै बन्नुपर्ने’ पार्टीको अडान दोहो¥याएको छ ।
ड्ड वाग्ले समितिले बुझाएको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन कहाँ थन्क्याइएको छ सरकार ?
ड्ड स्वदेशी लगानीमा बन्न उपयुक्त ठहर गरिएको बहुउद्देश्यीय परियोजना बिदेशी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पने तयारीमा के नियत लुकेको छ सरकार ?
ड्ड डिजेल र पेट्रोल खरिदमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बुढिगण्डकीका लागि उठाइंदै आएको अर्बौंको रकमको स्थिति के छ सरकार ?
ड्ड स्थानीयबासीलाई मुआब्जा वितरणमा किन नियतबस अनियमितता गरिएको छ सरकार ?
ड्ड ओली सरकारको अपारदर्शी रवैयाका कारण अब बुढिगण्डकिको भविष्य के हुन्छ ?